Ungavimba kanjani amasayithi we-porn ngaphandle kokufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Ezocansi nezocansi
Uma une-antivirus enhle efakwe kwikhompyutha yakho ungahle ungadingi iseluleko esizokhuluma ngaso ngezansi; noma kunjalo, kulula ukuthi uzame buyekeza imisebenzi enikezwa uhlelo lwe-antivirus lapho kukhawulelwa ukuphequlula kumawebhusayithi athile lapho lawo ma-pornos angafakwa khona ohlwini.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi izinhlobo eziyisisekelo noma zamahhala zalezi zidambisigciwane zingaba nalesi sici ukuvimba amasayithi we-porn. Ngalesi sizathu nangaphansi, sizoklelisa uchungechunge lwezinsizakalo eziku-inthanethi ezizokusiza ukumisa ezinye izici zokuphequlula kwakho i-Intanethi ukuze amawebhusayithi we-porn angaveli nganoma isiphi isikhathi futhi nangaphezulu, uma ikhompiyutha ihlala yincane kakhulu.
Ukuthi lawa mawebhusayithi aku-inthanethi asebenza kanjani ukuvimba i-Internet ye-porn
Asikwazanga ukuqinisekisa ukuthi isicelo esiku-inthanethi ngoba lokhu kuzomela ukuthi ibhulokhi yenziwa kuphela uma ufaka iwebhusayithi eshiwo. Lokho lezi zinhlobo zamasevisi aku-inthanethi akwenzayo ukuphatha noma phatha ikheli le-ip lekhompyutha yakho futhi kwezinye izimo, okungokwerutha yakho. Ngokuphathelene necala lokugcina, awudingi ukwenza cishe noma yini, yize ezimweni ezithile kuyadingeka ukwazi amapharamitha ambalwa we-router, kufanele ufake ukumiswa kwayo nezimpawu zokufinyelela ezifanele. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani sincoma ukuthi ubuyekeze i-athikili ukuthi siphakamise phambilini ngalesi sici.
1. I-OpenDNS FamilyShield
Le sevisi eku-inthanethi inesici sokuvimba amakheli athile e-DNS, okuvumela abasebenzisi bomuntu siqu bekhompyutha (noma labo abasebenzisa i-router efanayo) ukuthi babhekabheke i-Intanethi kumakhasi avunyelwe kuphela.
Yize ingenye yezinsizakalo ezithandwa kakhulu okwamanje, kusekhona ukungahambisani okumbalwa lapho labo abakusebenzisayo kuzodingeka balwe nakho. Lokhu kuvame ukwenzeka kufayela le- ukungavumelani neziphequluli ezithile ze-Intanethi; Isibonelo, i-OpenDNS ingasebenza kakhulu kuMozilla Firefox, noma ku-Google Chrome kufanele ulinde isikhathi eside ukuze izinguquko zisebenze. Ngaphezu kwalokhu, kunamakhasi athile e-webhu wezocansi alawula ukugwema le nsizakalo eku-inthanethi, ngakho-ke kumele azame ukuwavimba ngesandla ekumisweni kwawo.
2. I-Norton ConnectSafe
Uma isiphakamiso esishilo ngenhla singasebenzi, sincoma ukusebenzisa lesi. Okufanayo kuye kwaba izinhlelo ezintathu eziyisisekelo zokuvimba amakhasi e-porn e-porn noma enye indawo lapho umsebenzisi efisa ukukhubaza ukuphequlula:
Izilungiselelo zokuphepha nokuvinjelwa kwamakhasi e-pornos
Izilungiselelo zokuphepha, ukuvimba amawebhusayithi angaziwa nama-porno
Umsebenzisi kufanele akhethe noma yikuphi kokukhethwa kukho okuthathu, okuzoncika kuntshisekelo anayo uma kukhulunywa ngokubhuloga izinhlobo ezahlukahlukene zamawebhusayithi.
3. I-MetaCert DNS
Lokhu kuyindlela enhle kakhulu uma nje sisebenzisa iFirefox noma iGoogle Chrome kwikhompyutha yethu.
Lesi simo singenxa yokuthi empeleni lokhu okunye kungumphelelisi nokwandiswa okufanele kufakwe kuziphequluli ze-Intanethi ezishiwoyo. Bazokhomba ikheli le-IP elihlaselayo bese balivimba ngokushesha, bethi limelela amawebhusayithi ezocansi.
Ngale ndlela sizoba nethuba lokuvimba amakhasi e-webhu ezocansi, amasayithi lapho kukhuthazwa khona utshwala, ukubhema noma udlame ngokuzenzakalela. Uhlobo lwamahhala lwanele ukulusebenzisa ngoba lapho, ungakhetha phakathi kwezigaba ezingama-50 ezahlukahlukene ezihlanganisa amawebhusayithi angavumelekile ayizigidi ezingama-50 nokuthi singavimba kalula.
Ngomsebenzi oyinhloko ofanayo walezi ezinye izindlela esizishilo ngenhla, lapha nathi sinethuba lokuvimba amawebhusayithi ezocansi.
Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lizosiza abasebenzisi balo ukuthi bagweme ukufakwa kohlobo oluthile lwe-malware, ama-botnets, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi noma olunye uhlobo lokulandwayo okungekho emthethweni.
Ukuze usebenzise noma yiziphi ezinye izindlela esiziphakamisile, umsebenzisi kuzofanele ukuthi avule i-akhawunti yamahhala futhi lapho, vumela uhlelo luzilungiselele ngokuzenzekelayo isevisi ngekheli le-IP lekhompyutha yomuntu siqu noma i-router.
Noma kunjalo, uma esikhundleni sokuvimba lokhu okuqukethwe kwabantu abadala ukhetha ukwazi ukuthi yini i- indawo engcono kakhulu yezocansi, chofoza kusixhumanisi esisanda kukushiya ngoba kuningi futhi kuhle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ezocansi nezocansi » Ungavimba kanjani amasayithi we-porn ngaphandle kokufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza
Ungawahlonza kanjani amafayela ngaphandle kokunwetshwa ku-Windows